Ndụmọdụ m 10 iji bulie Blog gị | Martech Zone
Ntụziaka 10 iji bulie Blog gị
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 13, 2006 Fraịdee, June 19, 2015 Douglas Karr
Kọmputa Shopper nwere isiokwu na Na-achọpụta Blog gị. Isiokwu ahụ nwere ndụmọdụ ụfọdụ bara uru mana echeghị m na ha nwetara ihe ndị ka mkpa ha n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ na ha ekpuchighị ihe niile dị mkpa. Anọ m na-aga n'ihu na-eto eto na blọọgụ m n'ime ọnwa ole na ole gara aga. M na-eji nlezianya atụ ọgụgụ ndị na-agụ akwụkwọ m, isi mmalite nke ndị na-agụ akwụkwọ m, ma na-agbanwe ya. Amụtawo m ton n’ime ọnwa ole na ole gara aga.
Nke a bụ Top iri m:
Echegbula onwe gị banyere etu blọọgụ gị si adị. Ekwetaghị m isiokwu dị na nke a. Ọtụtụ blọọgụ dị nnọọ mfe, na ụfọdụ nnukwu blọọgụ dị njọ. Ndị mmadụ nwere mmasị na ogo nke posts, ọ bụghị usoro mara mma. Ewezuga, n’ezie, ọ bụrụ na ịde blọgụ gbasara imewe na eserese.
Tinye foto ma ọ bụ ọtụtụ foto nke onwe gị na saịtị ahụ. Rịba ama foto m na isi m yana foto na nke m Banyere peeji. Blog bụ mkparịta ụka gị na ndị na - agụ akwụkwọ gị. O siri ike inwe mkparịta ụka mgbe ị na-amaghị onye ị na-agwa ya okwu!
Jide n'aka na ị na-eji sọftụwia ịde blọgụ nwere atụmatụ ndị a: trackbacks, pings, njikọ, mkpado, edemede, edemede, permalinks, nkọwa, ọchụchọ, saịtị saịtị, nchekwa spam, ọchụchọ na RSS. Mụta otu esi eji ha niile rụọ ọrụ nke ọma. M na-eji WordPress. Ọ chọrọ ụfọdụ plugins maka ụfọdụ atụmatụ, mana ọ dị mfe iji ma sie ike. Kama ịnabata WordPress, ebudatara m sọftụwia ahụ ma lekọta ya n'onwe m - n'ụzọ ahụ enwere m ikike ịchịkwa ngwanrọ, data, URL na mgbasa ozi - ma nwee ike ịhazi ya ka ọ masị m.
Debanye ma ọ dịkarịa ala otu ọrụ dịka Teknụzụ iji mee ka mgbasa ozi gị dịkwuo elu. Ndi mmadu choo Technorati site na nkpado ichota ihe iguru.
Mgbe ịchọtara blog ọ masịrị gị nke ukwuu, tinye njikọ ya na saịtị gị. Rịba ama njikọ m n'akụkụ m. Adịla obi ụtọ ma jụọ ndị na-agụ akwụkwọ na-atọ gị ụtọ itinye njikọ gị. Dika otutu saiti jikotara na blog gi, blog gi g’aga n’ihu ime ka ya bawanye ikike. Nke a ga - emeziwanye ntinye ya na igwe nchọta ihe ntanetị.
Bido tinye ezigbo onye na - agụ RSS ma bido debanye aha na blọọgụ ndị ọzọ. M denye aha na ihe dị ka 30 ugbu a tinye n'ọrụ Google Labs na-aguta. Ọ na-enyocha ihe m gụrụ ma nwee ihe ndị ọzọ dị jụụ. M na-ekwu okwu mgbe mgbe na ihe ndị ọzọ ma na-ahapụ njikọ mgbe niile na saịtị m. Ọ bụrụ na m chọrọ ide post zuru oke karịa ikwu okwu, ana m ahụ na m na-ewepụta trackback na edemede ha.
Jiri otu ezigbo ihe nyocha. M na-eji Google n'ihi na ọ bụ ma n'efu ma dị mfe ijikọta na WordPress. Naanị m na-etinye obere edemede (nke ahụ na Google na-eweta) na isiokwu nke isiokwu m ma ọ dị m mma ịga! Lele nchịkọta gị ga-enyere gị aka ịhụ otu ndị na-agụ akwụkwọ si abanye na saịtị gị, ewu ewu ederede gị, yana okwu ọchụchọ ndị na-adọta ha, wdg.
Ahu nagide ndepụta nri. M na-eji FeedPress. O nwere otutu atụmatụ ndị ọzọ na ya ma nye gị ohere ịlele ojiji nri gị. Otu okwu ndụmọdụ, dị njikere iji dochie aha isiokwu RSS gị. Imirikiti ngwaọrụ ndenye aha RSS na-achọ njikọ ahụ na isi. Ọ bụrụ n ’ịgbanyeghị ụzọ RSS gị Feedburner, ị gaghị ewere ndị debanyere aha ha niile!
Blog mgbe. Na blọgụ m, achọpụtara m na ọ bụrụ na m dee edemede 1 ma ọ bụ 2 kwa ụbọchị na ndị ọbịa na-alọghachi na-abawanye. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụrụ na mfere otu ụbọchị, m ga - ejide 'ndị ọbịa. Ọ bụrụ na m gafee 2, atụfuru m ole na ole. Kpachara anya ka ị ghara ịde blọgụ ọtụtụ oge. M debanyere aha Nchịkọta, ma otu ahịrịokwu na-ekwu okwu kwa minit ole na ole na-akwọ m akụ iji gbalịa ịkwado. O nweela ihe ịga nke ọma na blọgụ ya n'agbanyeghị. Ọ na-atọ ụfọdụ ndị ụtọ. Echere m na nke a bụ otu n'ime ihe ndị ahụ ị ga-egwu ma hụ site na nnwale. Ihe ọzọ ebe a bụ oge. Gbaa mbọ hụ na mgbe ị nụrụ ma ọ bụ hụ ihe ọ bụla na isiokwu, ị na-eme ngwa ngwa dị ka o kwere mee ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye ndị na-ege gị ntị. Ndị na-agụ ya na-achọkarị oge na mmemme ahụ, ọ bụghị mgbe emechara.
Blog nke ọma. Kwesighi ịnọ na isiokwu na blọọgụ gị mgbe niile. Cheta, blog a bụ mkparịta ụka dị n’etiti gị na ndị na - agụ akwụkwọ gị. Ha na-amata gị ma ị na-agba mbọ ịmara ha. Ihe osise nke ezumike gị ma ọ bụ nkịta gị ga-ahapụ ha n'ime ụwa gị ntakịrị miri ma mepụta mmekọrịta ka ukwuu na ha. M na-ewepụta oge kwa ụbọchị na-eche gbasara ihe m nwere ike ide na blog. Onweghi otu ubochi nke na amaghi ihe obula, idebe ihe, ma obu nuru ihe… ya mere enwere m obi uto igwa ya ndi na aguru m. Na-ekwu eziokwu, na-agwa ya ihe ị na-eme nke ọma.
Nke ahụ bụ ihe m mụtara ruo ugbu a. Aga m aga n'ihu na-eme mgbanwe na blọọgụ m iji bulie ikpughe ma melite ogo m. De blọgụ gbasara mmelite na-aga n'ihu.
M ga-akwado ụfọdụ ihe ọgụgụ reading ọkacha mmasị m bụ Mkparịta ụka gba ọtọ, ma achọtara m nnukwu ndepụta nke akwụkwọ ntanetị ndị ọzọ na Nkwenye.
Mmelite: August 17, 2006 - Edere maka ProBlogger Nchịkọta Idekọ Otu maka Ndepụta.
Tags: Analyticsnhazi blogBloggerịde blọgụigecommentsndepụtana-amaliteinstapunditnjikọpermalinkspingsRSSChọọ MarketingsidebarSitemapsnchebe spamtagsteknụzụtrackbacks
Aug 13, 2006 na 8:00 PM
Akwa post Doug! Dị ka nzuzu dịka ọ nwere ike ịdị, enwere m nsogbu na nọmba 3. Enwere m otu foto m tinyere na peeji nke m, mana ọ bụụrụ m ezigbo ike ime. M na-etinye ya na blọọgụ m ka nna m wee cheta ozugbo ihe mere o jiri dee peeji ahụ - mana ọ mere ka m nwee obi iru ala! Ekwesịrị m ị nweta foto ọzọ. Ikwuru eziokwu - m na-anabata foto mgbe niile - ọ na-amasị m ịmara onye mụ na ya na-ekwu! (BTW - nke ahụ bụ foto dị mma na nkụnye eji isi mee gị!)
vaspers na grate
Aug 14, 2006 na 12:54 PM
I chefuru akụkụ ụfọdụ dị mkpa, na m ga-eji obi ụtọ weta ugbu a ime ka ọmarịcha blọgụ a bawanye.
(1) Nhazi bụ akụkụ kachasị mkpa nke weebụsaịtị ọ bụla dịka Stanford Persuasive Tech na BJ Fogg, PhD si kwuo. Ọ bụrụ na ọ dị ka ihe na-asọ oyi, onye na-amu amu, onye jọgburu onwe ya, onye nzuzu, nke ụmụaka, wdg, ndị ọrụ ga-agbapụta na sekọnd ma ghara ịlaghachi.
(2) Ọgaranya, Na-adịghị ahụkebe, Ọdịnaya Dị Mkpa.
(3) Matt Mullenweg gwara m na isi nzuzo ya bụ iji mmekọrịta na blogosphere, na-aza ajụjụ, na-ezipụ echiche na blọọgụ ndị ọzọ, na-ezigara ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ ozi dị mkpa ma ọ bụ ndụmọdụ dị mkpa, wdg. Bụrụ ezigbo agbata obi na obodo blog.
(4) Dị iche iche. Ihe ịtụnanya na-atụghị anya ya. Nnwale.
(5) Multi Media: pọdkastị, ihe ọkpụkpọ vidiyo, foto, nka, katuunu, eserese, eserese, wdg.
(6) Nzaghachi ngwa ngwa na ihe ndị edere na blọọgụ gị, jiri ezi obi na nkwanye ùgwù soro ndị na-agụ akwụkwọ gị na-emekọrịta ihe.
(7) Nkọwa ihu ma ọ bụ Banyere M, na ihu ihu kọntaktị ma ọ bụ ụdị ozi ntanetị.
(8) Ndepụta nke "akwụkwọ ndị kachasị ewu ewu" ma ọ bụ edemede ndị ọzọ dị mkpa na-adọrọ mmasị na sidebar, yana Posts na nso nso a na Monthly Archives.
Naanị aro ole na ole gbasara akụkụ ndị m chere dị oke mkpa.
Feb 11, 2007 na 3:47 PM
Nnukwu ndụmọdụ, daalụ. Agbalịrị m ịnara ndụmọdụ gị na # 7 ma jiri Google Analytics, mana ekwesịrị m ikweta na ntuziaka ha enweghị nghọta maka ndị na-abụghị teknụzụ, ndị ọrụ WordPress dị ka onwe m. Maka ndụ m, enweghị m ike ịchọpụta ebe m ga-etinye koodu ha na-agwa m na m ga-etinye.
Feb 13, 2007 n’elekere 1:57 nke abali
Ndewo Doug, akwụsịrị m na saịtị gị ugboro ole na ole ma enwere m obi ụtọ n'ihe m hụrụ ka ị na-eme. 'Ve gosiputala ụfọdụ akụkụ dị mkpa nke na-enyere anyị aka nyochaa ngwa ọrụ anyị ji blọọgụ anyị ugbu a. Daalụ maka ụfọdụ ezigbo ndụmọdụ.
Feb 13, 2007 na 12:09 PM
Daalụ nke ukwuu maka ụdị okwu gị, Robyn! Na ekele maka ileta !!!
Edemede mara mma nke ọma. Aha m bụ Garry na m na-ede na blog nke onwe m na-enye ndụmọdụ maka ịde blọgụ nke ọma. Anọ m na-achọ na Google maka ihe m ga-ede banyere ya wee chọta isiokwu gị ebe a. Ọmarịcha ọrụ m ga - ejide n'aka na ị ga - enye njikọ a n'isiokwu a na post m na - esote. 🙂
Jun 8, 2007 na 7:51 AM
Daalụ Garry! Aga m na-enyocha saịtị gị n'oge na-adịghị anya.
Nov 28, 2007 na 2:31 PM
Eeh, nke a bu blog di nma. 😉
M tinye gị na ndị ọkacha mmasị m.
Jul 26, 2011 na 8:36 PM
Ọ bụ ezigbo echiche, amaara m na ọ dịkwa oke mmetụta na igwe nchọta, ekele maka ndụmọdụ ya